Emilio Lara. Kubvunzana nemunyori weSentinel weDoto | Zvazvino Zvinyorwa
Emilio Lara. Kubvunzana nemunyori weSentinel weDoto
Kutora mifananidzo: Emilio Lara, Twitter nhoroondo.
Emilio lara yakaburitsa gore rino Sentinel weDoto, yake yekupedzisira novel. Munyori igenense yave imwe yeakanyanya kukosha enhoroondo yemhando yekutenda ku Hukama hweiyo isingakundike Armada, Iye anogadzira wachi paPuerta del Sol o Nguva dzetariro. Ndinokutendai zvikuru nekuda kwemutsa wenyu uye nekuwana nzvimbo yeizvi indavhiyu kwaanotiudza zvishoma nezve zvese.
Emilio Lara - Bvunzurudzo
BHUKU NEWS: Musoro wenyaya yako ndeye Sentinel weDoto. Chii chaunotiudza nezvazvo uye iyo pfungwa yakabva kupi?
EMILIO LARA: Icho chinyorwa chinokonzeresa ndiyo kuuraya inoitwa neChirungu nekukurumidza iyo Hondo Yenyika Yechipiri. Pakati pemazuva gumi ekutanga aGunyana 1939, anopfuura mazana emazana mazana masere ekitsi nembwa zvakagadziriswa Kunzvenga, kana maGerman akabhomba London nemamwe maguta uye varidzi vemhuka vakaurawa kana kukuvara, mhuka dzinovaraidza usava nesimba. Yakanga iri chibairo chikuru chinokurudzirwa nerudo, kunyange hazvo zvichishamisa. Ndakasangana ne nhoroondo yezvakaitika ndichiverenga chirevo muSunday yekuwedzera, uye ndakaona kuti paive ne nyaya izere nemanzwiro. Aya ndiwo maratidziro engano yangu.
THE: Aive voracious muverengi muverengi, uye bhuku rekutanga randakaverenga raive Platero neni, uye zvakare enganonyorwa enganonyorwa dze Jules Verne, munyori akandifadza pandakanga ndichidzidza EGB.
THE: Ndichiri kufarira Miguel Delibes Álvaro cunqueiro. Nekufamba kwenguva, vamwe vakabatana: Firipi Roth, Robert MakororoGarcia Marquez, Vargas Llosa, Juan Slav Galán, Arthur Perez-Reverte...
THE: Chero yeiyo trilogy ye Hilary Mantel about Henry VIII.
THE: Ini handinetseki nezve izvo. Ini ndoda kuverenga mune armchair, Nechiedza chakanaka kana chakagadzirwa. Ndinonyora muhofisi mangu kukomputa, ndokutora manotsi emaoko mumabhuku. Ndakaverenga nekunyora zvakanyanya nekuti Ini ndinoronga nguva yangu Uye ini ndinoedza kusashatisa nemombe.
THE: Ndakambotaura kare kuti ndinoda kunyora muhofisi yangu, umo mune komputa uye ndinowana mamiriro erunyararo. Ndine sei kugona kukuru kwekubvisa Kubva pane ruzha uye nharaunda, ini ndinogona kuverenga chero: Ndinozvinyudza mune bubble, inini.
THE: Ehe saizvozvo. Zvingave zvinonyadzisa (uye zvisina musoro) kuti semunyori wenhoroondo dzenhoroondo haana kuverenga mamwe marudzi. Leo nhema nhema, yataigona kudaidza kuti ngano yekunyora, kuzvipira, zvekare yenyaya uye yakawanda rondedzero uye nyaya.
THE: Izvozvi Njodzi, rondedzero nyowani yaNiall Ferguson; Iye weItaly, naPérez-Reverte, y Dzokera kupirakanyorwa naAntonio Munoz Molina. Ini ndatanga kunyora a inoverengeka yakaiswa muRazvino Age.
KU: Iwe unofunga kuti chiitiko chekutsikisa chiri sei?
EL: Kudzokera kumashure mushure mekutyisidzika kwehupfumi kwakatanga muna 2008. Chirwere checoronavirus chakareva kuvandudzwa kwebhuku rekutenga mabhuku, izvo zvakanaka kune chikamu chekutsikisa icho, muSpain, chandinoona chakadzikama. Ndinoziva kuti iripo unease pakati pevanyori vatsva uye avo vanoshuvira kuve, nekuti ivo vanowana matambudziko mazhinji kuburitsa, asi nguva dzese dzave dzakaoma kutsikisa kekutanga. Chii chinoitika ndechekuti ikozvino huwandu hwevanhu vanoda kuona yavo nyowani yakaburitswa yawanda.
THE: Izvo hazvisi kunyanya kunetsa kwandiri nekuda kwebasa rangu semunyori uye mudzidzisi, kunyangwe kumwe kuzorora kwekushambadzira kwauya zvinobatsira, sezvo zvakandibvumidza kuverenga zvakadzikama uye kunyora pasina chero mutoro. Uye chero mamiriro ezvinhu asina kunaka akanaka kuti uwane kuita kwekunyora kubva mairi. Izvo zvese zvinoenderana nehunyanzvi uye tarisiro iyo iyo munyori anoda kutora. Hongu zvirokwazvo, Ini handifarire zvachose mumanovels anogona kubuda nezve coronavirus kana hosha emakore apfuura. Iko kutanga kudiki!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Emilio Lara. Kubvunzana nemunyori weSentinel weDoto
Daniel Defoe. Chiitiko chekuzvarwa kwake. Zvimwe zvidimbu